အရွယ်ရောက်သူနှင့်ကလေးသူငယ်များအတွက်သတိထားရမည့်နည်းစနစ်များ၊ အသုံးချမှုများ၊ နည်းစနစ်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ဟူသောဝေါဟာရကို သတိ ၎င်းကိုယနေ့လူများအားစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်လျှော့ချခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောကုထုံးများအနေဖြင့်အသုံးပြုသည်။ အချို့က၎င်းကိုဖက်ရှင်နည်းစနစ်ဟုယူမှတ်ကြသော်လည်းအမှန်မှာ၎င်းသည်ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓဘာသာ၏ဗဟုသုတအပေါ်အခြေခံသည်။ နောက်ဆောင်းပါးတွင်၎င်းမှထွက်ပေါ်လာသောစိတ်ပညာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းလမ်းများအားလုံးနှင့်အတူ၎င်းကိုရှင်းလင်းသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားပါမည်။ အလားတူပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးများနှင့်သက်ဆိုင်မှုအပေါ်အရည်အသွေးရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ပြသည်။
Mindfulness ကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်တိကျသောရည်မှန်းချက်ရှိသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်သောကြောင့်အတော်လေးရှုပ်ထွေးသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်အတွက်လူတို့သည်တိကျသောအရာတစ်ခုခုကိုမရှာကြောင်းသတိပြုရမည်။ စောင့်ကြည့်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံနည်းလမ်းသစ်ကိုကျင့်သုံးရန်ဖြစ်သည်။
အချို့ကမူ၎င်းကိုအရည်အသွေးတစ်ခုအဖြစ်ယူမှတ်ကြပြီးအချို့ကမူဝိညာဉ်ရေးနယ်ပယ်ရှိသက်သေအထောက်အထားများမှထွက်ခွာရန်မလိုဘဲ၎င်း၏တိုးချဲ့မှုတစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသည့်အယူအဆတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်။ အမှန်တရားမှာဤဖြစ်ရပ်အားလုံး၌၎င်းကိုဘဝလမ်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအဆုံးသတ်အောင်မြင်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအနေဖြင့်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကွဲပြားခြားနားသောစာအုပ်များဖတ်ရှုခြင်းမှတဆင့်, ဒါပေမယ့်အတွေ့အကြုံသူ့ဟာသူမှတဆင့်အောင်မြင်သည်မဟုတ်။
1.1 "သတိ" ၏ယန္တရားများ
1.2 သတိ applications များ
2.1 အဘယ်ကလေးများအတွက်သတိသို့မဟုတ် "သတိ" ကိုသုံးနိုင်တယ်?
ဦး စွာအနေဖြင့်၎င်းကို“ အပြည့်အဝအာရုံစိုက်ခြင်း”၊ “ စင်ကြယ်သောအာရုံစူးစိုက်မှု” သို့မဟုတ်“ သတိထားအာရုံစူးစိုက်မှု” အဖြစ်ပြန်ဆိုရန်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်၊ သို့သော်စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်ပင်အင်္ဂလိပ်ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုစိတ်ထဲတွင်အသုံးပြုရန် ဦး စားပေးသည်။ ဒီခေါင်းစဉ်ကိုကိုးကားပါ။ သို့သော်ယင်း၏မူလအစသည်အမှန်တကယ်မရှိချေ၊ satiစာသားအရသတိသို့မဟုတ်အောက်မေ့ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
သတိကိုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည် သတိ၏အမြဲတမ်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြည်နယ် ပစ္စုပ္ပန်အခိုက်၌ရောက်ရှိ, အရာမှမြင့်တက်ပေးသည် သတိ။ ဒီလူနေမှုပုံစံစတဲ့အဆိုပြုထားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအကုန်လုံးကုန်ကျမှာမဟုတ်ဘူး ဘက်လိုက်မှု, တံဆိပ်ကပ်ခြင်း, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ နှင့်ကြိုတင်အမြင်များဘေးဖယ်ထား။
ဤစကားလုံး၏အရည်အသွေးကိုလူသားအားလုံးပိုင်ဆိုင်သည်ကိုသတိပြုရန်မှာအရေးကြီးသည်။ သို့သော်အနည်းငယ်သာတိုးတက်သည်။ အမှန်မှာလူတို့သည်များသောအားဖြင့်ပြproblemsနာများ၊ သူတို့မကြိုက်သည့်အရာများ၊ သူတို့၏ဘ ၀ နှင့်သဘောမတူညီမှုများနှင့်အခြားအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏အတွေးများကိုနှစ်မြှုပ်ထားကြသည်။
သတိထားအာရုံစိုက်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ကြိုးစားသည်။ အာရုံစိုက်ရန် ငါတို့ဘဝမှာဖြစ်ပျက်သမျှ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ; ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်သည့်အခါဆင်တူသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခြေအနေတစ်ခုစီကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤစဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်သန္ဓေတည်။ ဆွေးနွေးခြင်းသည်အမြဲတမ်းတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းဖြစ်ကာအရာရာကိုလက်ခံသကဲ့သို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဒီအတွေ့အကြုံကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဒီနယ်ပယ်မှာအတွေးအခေါ်တွေကိုစွမ်းအင်ရှိတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများမှတစ်ဆင့်သူတို့ကိုစွမ်းအင်များများထောက်ပံ့ပေးသည်နှင့်အမျှခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိသောမျိုးဆက်များဖြစ်သောအများအားဖြင့်အပျက်သဘောဆောင်သောမျိုးဆက်များသည်ပြိုကွဲစေသည်။ ဒါကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်ဝိညာဏ် activated ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်။ သူမကို ဦး စားပေးခြင်းအားဖြင့်တင်းမာမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောလျှံထွက်နေသောစိတ်ခံစားမှုများကိုဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားကျွေးမွေးသောစွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုကိုရပ်တန့်စေပြီး၎င်းတို့ကိုလျှော့ချပေးပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
သတိစောင့်ကြည့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမသုံးပါ။ အာရုံမှတဆင့်ရိပ်မိကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများလေ့လာရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ ၎င်းသည်အတွေးများကိုထုတ်လွှင့်ရန်ရပ်တန့်လုနီးပါးဖြစ်စဉ်ကိုအစပြုသည်၊ တုန့်ပြန်မှုကိုလမ်းညွှန်မည့်အစားတစ် ဦး ချင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ သို့သော်သတိကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ဆက်နွယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအခြေအနေများဆိုးရွားပုံပေါက်လျှင်ပင်မငြိမ်သက်နိုင်သောငြိမ်သက်ခြင်းကိုရရှိစေသည်။
၎င်းသည်အတင်းအဓမ္မဖြစ်စဉ်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း၊ အမြဲတမ်းအာရုံစိုက်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းလက်နက်ချခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်ထိခိုက်စေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဤအချက်ကလူအများစုက၎င်းကို passive သဘောထားကိုကျင့်သုံးရန်ဖြစ်သည်ဟုထင်စေနိုင်သည်။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်၎င်းသည်လုံးဝတက်ကြွနေသည်။ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းသည်လက်ရှိအချိန်ကာလတစ်ခုစီတွင်ဖြစ်ပေါ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သတိ applications များ
MBSR (Mindfulness-based Stress Reduction) ဟုလည်းလူသိများသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်းတွင်ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၉၉၀ တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိမက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရဆရာဝန် Jon Kabat-Zinn ကအဆိုပြုခဲ့သည်။
MBSR ၏နိယာမသည် သတိ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရပ်များ, အခိုက်အားဖြင့်တစ် ဦး, လက်ခံမှု၏သဘောထားကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲတရားစီရင်ပိုင်ရှောင်ရှား။ ဤနည်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး သည်အမြဲတမ်းဘာဝနာသဘောထားကိုကျင့်သုံးရန်နှင့်၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သောကြောင့်သူသည်ကိုယ်ခန္ဓာအာရုံကိုဂရုပြုနေရန်ကြိုးစားသည်။
ဤအစီအစဉ်ကိုရှစ်လကြာတစ်ရက်လျှင်နှစ်နာရီမှသုံးနာရီကြာသင်တန်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ တစ်နာရီ ၄၅ မိနစ်သို့မဟုတ် ၄ နာရီအကြားတွင်တရားအားထုတ်ရန်နည်းစနစ်များ၊ အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုတိုးတက်စေရန်နှင့်နေ့စဉ်ဘ ၀ အခြေအနေတစ်ခုစီတွင်အသိအမြင်မြင့်မားလာစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်၏နှေးကွေးခြင်းနှင့်သတိရှိသောခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ယောဂပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နည်းစနစ်များ၊
သတိ -based သိမြင်မှုကုထုံး:
၎င်းကို MBCT (Mindfulness-based Cognitive Therapy) ဟုလူသိများပြီးဤအတွေ့အကြုံ၏လတ်တလော application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းအာရုံစိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြပြီးသော MBSR ကိုအခြေခံသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သိမြင်မှုကုထုံးများတွင်အသုံးပြုသည့်အမျိုးမျိုးသောဒြပ်စင်များပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်လူနာအားသူတို့၏အခြေအနေ၊ အပျက်သဘောအတွေးများ၏လွှမ်းမိုးမှု၊ အသုံးမကျသောအတွေးများနှင့်၎င်းနှင့်၎င်းတို့၏ယေဘုယျနေ့စဉ်ဘ ၀ အပေါ်ပညာပေးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
၎င်း၏လျှောက်လွှာကိုသိမြင်မှုကုသမှုဒြပ်စင်များပါဝင်သည်ပေမယ့်ကနေသိသိသာသာကွဲပြားနေသည်။ သိမြင်မှုကုထုံး၏လုပ်ဆောင်မှုကိုရှာသည် လူနာရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြောင်းလဲ, အပြုသဘောနှင့်အတူအပျက်သဘောအတွေးများကိုအစားထိုးခြင်းဖြင့်။ သို့သော် MBCT သည်လက်ခံမှုတစ်ခုထားရှိရန်ကြိုးစားသည်။ အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ဓာတ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသတိပြုမိပြီးဖြစ်သောလူနာသည်မိမိကိုယ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမပြုဘဲဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းမပြုဘဲအဖြစ်မှန်ကိုလက်ခံပြီးလက်ခံသည်။
MBSR နှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားမှုများကိုလျှော့ချရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကုသမှုဖြစ်သည်။ ၂၁ ရာစုအစပိုင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုများအရဤကုထုံးသည်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၅၀% အထိစိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုခံစားခဲ့ရသောလူနာများပြန်လည်ထူထောင်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်း၏အဓိပ္ပာယ်၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်၎င်းမှတီထွင်ခဲ့သည့်နည်းလမ်းများကိုသိရှိပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်တည်ရှိမှုသည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာစေပြီးလူကြီးများတွင်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချရန်ကန့်သတ်ထားသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့သတိဟာကလေးဘဝကတည်းကသုံးနိုင်တယ်။ အဲဒါကလူကြီးဘဝမှာလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေမဖြစ်အောင်တားဆီးပေးနိုင်တယ်။
အဘယ်ကလေးများအတွက်သတိသို့မဟုတ် "သတိ" ကိုသုံးနိုင်တယ်?
ယေဘုယျအားဖြင့်အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်ကြားကလေးများအတွက်သတိထားလေ့ကျင့်ခန်းများကိုဖော်ပြသည်။ ဒီအကွာအဝေးတွင်, ကွဲပြားခြားနားသောကိစ္စရပ်များက၎င်း၏လျှောက်လွှာကိုအကြံပြုထားတဲ့အတွက်မီးမောင်းထိုးပြလိမ့်မည်
အလားတူပင်သူတို့ကျယ်ပြန့်ဘို့အကြံပြုထားတယ် hyperactivity ပြproblemsနာများ, dyslexia နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါနှင့်အတူကလေးများ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်ဆက်စပ်။ သို့သော်သတိပြုရန်မှာဤအခြေအနေများအတွက်ကုစားကုသမှုကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းအစားပညာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ in နှစ်ခုလုံးတွင် ၄ င်းတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်နှင့်ပံ့ပိုးရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သတိပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်မှာကလေးများသည်သတိရလေ့ကျင့်ခန်းများသည်အရွယ်ရောက်သူများထက်များစွာတိုတောင်းမည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအရွယ်ရောက်သူများတွင်နေ့စဉ် ၂- ၃ နာရီအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် ၁၅ မိနစ်မှ ၃၀ မိနစ်ခန့်ကလေးငယ်များသည်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်သုံးကြိမ်လောက်နှင့်လုံလောက်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ကြာချိန်ကိုလည်းအသက်ပေါ်မူတည်။ ကလေးကြီးလေလေ ၁၅ မိနစ်ထက်ပိုပြီးတွေးတောဆင်ခြင်နိုင်သည်။
လျှောက်လွှာ ကလေးများအတွက်သတိ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုဒိုင်းနမစ်အားနားလည်ရန်နှင့်အပြည့်အဝတရားအားထုတ်ရန်အတွက်ဥပစာစကားများပါ ၀ င်သည်။
ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍“ Quiet and Attentive Like Frog” အပါအ ၀ င်အထူးပြုစာအုပ်များစွာရှိသည်။ ၎င်းတွင်ကလေးများ၊ မိဘများနှင့်ဆရာများအားသတိရစေရန်မိတ်ဆက်နည်းများကိုဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်ယေဘုယျအကြံဥာဏ်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်နည်းစနစ်၏တည်ဆောက်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်ပေးသည်။
လှိုင်းဝင်ရန်သင်ယူသည်: လှိုင်းများသည်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းမပြုနိုင်သောဘဝ၏ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။
မိုးလေဝသအစီရင်ခံစာ: ကလေးများသည်၎င်းတို့အတွင်းရှိအခြေအနေနှင့်မည်သို့ဆင်တူသည်ကိုမြင်ယောင်။ အပြင်ဘက်ရှိအခြေအနေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
အဓိကအကျိုးကျေးဇူးကတော့ အာရုံစူးစိုက်မှု၏တိုးတက်မှု၎င်းသည်သူတို့၏လေ့လာချိန်နာရီများ၌သူတို့၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်သူတို့၏အိမ်စာပြီးဆုံးခြင်းတို့အတွက်များစွာအကျိုးရှိလိမ့်မည်။ အာရုံပြproblemsနာများလျော့နည်းသွားပြီးအသိပညာကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာရယူနိုင်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်အခြားလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန်အချိန်နှင့်အချိန်ပေးသည်။
၎င်းသည်ငယ်ရွယ်စဉ်မှ စ၍ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုတစိုက်လေ့လာသင်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းသည်၎င်းတို့ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လေ့လာခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းတို့ဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းသည်ကလေးများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်မမျှော်လင့်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်သူတို့မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းတို့တွင်သူတို့ကိုကူညီလိမ့်မည်။
သတိရအဖြစ်လူသိများအဆိုပါ minfulness ဦး စူးစမ်းလေ့လာစောင့်ရှောက်မှုသည်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဖြစ်သည် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှာဖွေခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ လက်ခံခြင်းအားဖြင့်အရှေ့မှအစပြုခဲ့သော်လည်းလက်ရှိတွင်ကျယ်ပြန့်သောလက်ခံမှုရှိသည့်ကမ္ဘာ့အနောက်ဘက်သို့ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ၎င်းကိုသိခြင်းသည်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းသည်လူတို့၏လမ်းတိုးတက်စေရန်အလွန်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘဝ။ ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အားအကြောင်းကြားရန်နှင့်သင်၏ထင်မြင်ချက် (သို့) အတွေ့အကြုံများကိုမှတ်ချက်ပေးရန်ဤဆောင်းပါးကအထောက်အကူပြုမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု » သတိ » အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ကလေးသူငယ်များအတွက်သတိထားခြင်း - စက်ယန္တရားများ၊ အသုံးချမှုများ၊ နည်းစနစ်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
Dyslexia - အမျိုးအစား၊ ရောဂါလက္ခဏာ၊ အကြောင်းရင်းနှင့်ကုသနည်း